» Xogtii Ugu Dambeysay: Kala iibsiga Codka Xildhibaanada iyo Musharaxiin Saf dheer loogu jiro…Badweyntimes.com
Xalay ilaa Saaka Musharaxiinta Xilka M/weyne ee heysta Lacagta Waxaa saf dheer ugu jira xildhibaanada horay balanqaadka loogu sameeyay si codka looga iibsado balse isbadal ayaa ku yimid qiimada Codka Xildhibaanka.
Musharaxiinta ugu badan ayaa la xaqiijiyay inay bixinayaan lacag u dhexeysa $100,000 ilaa 150,000 oo dollarka Mareykanka ah, oo horudhac ah, islamarkaana lacagta qeyb ka mid ah la bixinayo kadib doorashada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in maalinta doorashada iyo saacadaha ugu dambeeyey laga yaabo in codadka ay qaaliyoobaan, ayna suurta gal tahay in xildhibaanada qaar la siiyo lacag ku dhow 200,000 oo dollar.
Musharaxiinta qaar ayaa la xaqiijiyay in lacagaha ay bixinayaan ay raaciyeen gaadiidka nooca raaxada iyo kuwa loo yaqaan Toyota Hilux oo dusha Sare ay ka fuulaan Ciidamada.
Musharaxiinta oo wakhti yar ay uga harsan tahay Doorashada ayaa isku falisaaya lacago farabadan waxaana la sheegayaa in qaarkood ay bixin doonaan lacago dheeri ah.
« Warbixinta Ka HoreysayWAR CUSUB: S/land oo Xabsiga dhigtay Gabdho ku libistay Dharka Calanka Somalia Balse…
Warbixinta Xigto »Dhageyso:Musharaxa Xilka M/weyne ku heysta C/kariin Guulleed oo Fariin Kulul diray…